Wararka Maanta: Sabti, Sept 8 , 2012-Iska-horimaad Deegaanka Miido ee Gobolka Jubbada Hoose ku dhexmaray Ciidamada Soomaaliya, kuwa Kenya iyo Al-shabaab
Iskahorimaadkan ayaa yimid kadib markii dagaalyahanno katirsan Al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada huwanta ah ku lahaayeen deegaankaasi, waxaana labada dhinac dhexmaray dagaal socday kudhowaad laba saacadood oo xiriir ah.
Mid kamid ah dadka ku dhaqan degmada Afmadow oo ka gaabsaday magaciisa ayaa HOL u sheegay in labada dhinac ay isu adeegsanayeen madaafiic iyo hub cu-lculus, wuxuuna intaa ku daray in daryanka rasaasta ay labada dhinac isku ridayeen laga maqlayay magaalada Afmadow.
Illaa imika lama garanayo khasaaraha kala gaaray labada dhinac, mana jiraan masuuliyiin katirsan dhinacyadii dagaalamay oo faahfaahin ka bixiyay.
Xaaladda ayaa lagu soo waramayaa in ay saaka tahay mid dagan, walow mararka qaar ay labada dhinac isweeydaarsanayaan madaafiic, waxaana labada ciidan ay weli isku horfadhiyaan goobihii ay xalay ku dagaalameen.
Gobolka jubada hoose ayaa mudooyinkii u danbeeyay waxa ka holcayay colaado u dhexeeya ciidamada dowladda, kuwa Raaskaambooni iyo militariga Kenya oo iskaashanaya iyo Xarakada Al-shabaab, waxayan colaadahaasi saameyeen dhaqdhaqaaqii guud ee bulshada ku dhaqan Jubooyinka.